Tuesday February 25, 2020 - 17:50:16 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wadanka Hindiya waxaa ka socda olole isir sifayn ah oo lagu haayo dadka muslimiinta ee aqaliyadda ku ah wadankaasi.
Wararka ka imaanaya dalka Hindiya ayaa sheegay in ku dhowaad toban qof muslimiin ah ladilay kuwa kalane la dhaawacay.
dadka gaalada mushrikiinta Hinduuska loo yaqaan ayaa weeraro ku qaaday xaafado muslimiintu deganyihiin oo kuyaal magaalada caasimada ah ee New Delhi. Kumanaan dad Hinduus ah ayaa xoog ku galay xaafadaha muslimiinta waxayna geysteen tacadiyo aan xisaab laheyn.
Saraakiisha booliska dowladda Hindiya waxay sheegeen in ugu yaraan 7 qof ay dhinteen halka tobanaan kale dhaawacyo soo gaareen kadib markii rabshado xooggan ka dhaceen magaalada, wararku waxay sheegayaan in dadka muslimiinta ay ay dhagxaan iyo baangado kala hortageen xagjirayaasha hinduuska ah.
Qiic iyo uura madoow ayaa cirka isku shareertay xaafado badan oo katirsan magaalada New delhi, goobaha lagubay waxaa kamid ah masaajid,dugsiyo qur'aan iyo guryo dhammaantoodna waxaa leh bulslimiinta xisbiga talada haya qeybtiisa siyaasadda ee lagu magacaabo بهاراتياdad taageersan ayaa gummaadkan eysanaya
Col, Aniil Koomaal oo uhadlay booliska magaalada New Delhi wuxuu sheegay in 50 qof ay dhaaacmeen oo ay kamid yihiin 11 askari boolis ah, Wargeyska Times of India ayaa soo daabacay Sawirro muujinayay suuqyo iyo gaadiid gubanaya iyo dhaawacyo waddooyinka daadsan.
muslimiinta ayaa markii ladhibaateeyay waxay dhigeen dibad baxyo ka dhan ah kuwa dhibka ugeystay in qaanuunka cunsuriga jinsiyadda ee dhowaan ay meel marisay xukuumadda hindiya.
Rabshadahan waxay imaanayaan xilli Donald Trump madaxweynaha Mareykank uu socdaal ku joogo wadanka Hindiya uuna kulamo laleeyahay madaxda dalkaas ugu sarraysa.